कठिन परिस्थितिबाट छुटकारा पाउन यस्तो पुजा गर्न छोरा र छोरीलाई लिएर निस्किन् हिमानी !! – Complete Nepali News Portal
कठिन परिस्थितिबाट छुटकारा पाउन यस्तो पुजा गर्न छोरा र छोरीलाई लिएर निस्किन् हिमानी !!
June 6, 2017	251 Views
काठमाडौं । पूर्वयवुराज्ञी हिमानी शाह आज राजपरिवारको कुलदेवता गोरखकाली मन्दिर गोरखा जाने भएकी छिन् । हिमानी छोरा हृदयेन्द्र, छोरी पूर्णिका र कृतिकालाई लिएर पूजाका लागी जान लागेको बताइएको छ । मन्दिरमा हिमानीले रुद्राभिषेक पनि गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
ज्योतिषशास्त्रअनुसार ‘भौम प्रदोष’ को समयमा रुद्राभिषेक गरिए गुमेको शक्ति प्राप्त हुन्छ, विपरीत र कठिन परिस्थितिबाट छुटकारा मिल्छ, पैतृक ऋणबाट पनि छुटकारा मिल्छ ।
जुन समय १२ वर्षमा १ पकट आउने र त्यसको उचित समयको उचित साईत पनि आज साँझका लागी निस्किएको बताइएको छ । करिब १ दशकदेखि हिमानी श्रीमान पारश शाहसँग विभिन्न कारणले असन्तुट रहेर छुट्टा छुट्दै बस्दै आएकी छन् ।
रेशम चौधरीको अनशन तोडीदा खुसीको आवाज निकाल्दै यी नेपाल आमाकी छोरी ? भिडियो सहित !
आइजा महापुरुष सक्छस भने मलाई बलात्कार गर !
यस्तो मर्मस्पर्शी गित पनि बनेछ फेरी रुवाउने भो नेपाली हरुलाई (भिडियो)
अङ्ग्रेजी शब्दकोश लेखक शिव न्यौपानेले दिए ऋषि धमलालाई जवाफ (भिडियो सहित)
March 24, 2017	104,550